Warbixin ku saabsan shirkii ardada soomaalida ee Minnesota & doorashooyinkoodii.
MPLS, MN- Galabta saacadda minnesota markey shantii & barkii galabnimo aheyd ayaa lagu dhawaaqay furitaanka kulankii ardada soomaaliyeed ee ujeedadiisu aheyd: doorashooyin lagu baddalayo maamulkii hore ee naadiga.
Guud ahaan maamulka ardadu wuxuu ka kooban yahay 5 ruux oo kale ah : Gudoomiye, ku xigeen, xogheyn, maaliyadda & xiriirinta. wuxuuna maamul walbaayi jirayaa hal sano oo kaliya, dabadeedna doorashooyin xor ah ayaa lagu soo dooranaa maamulka cusub.
waxaa xiisa laheyd in inta badan xarumaha waxbarashada gobolka laga soo wada hayaamay, iyadoo ilaa & 8 xarun waxbarasho si rasmi ah loo soo matalay.
si kastaba ha ahaatee xafladdani waxa eey aheyd mid si heer sare ah loo soo agaasimay oo soo jiidatay indhaha & dhagaha ka soo qeyb galayaasha xafladda.
doorashooyin si xor ah loo qabtay ayaa durbadiiba billowday (Democracy). waxaana halkii lagu doortay guddoomiyaha ururka ardada soomaaliyeed ee Minnesota ee cusub Mr C/rizaaq Cabdi - oo ah arday heer qalin jabin maraya oo baranaya culuumta computer-ka.
gudoomiyaha oo ka hadlaya qorshihiisa maamuleed ayaa balan qaaday " inuu ku dadaali doono dhisid ama isukeenid dhamaan ardada soomaalida ee woqooyiga ameerica" Mr C/rizaaq ayaa raaciyey " waxan ku dadaali doonaa in la helo macalimiin si gaar ah wax u barta ardada soomaaliyeed ee waxbarashada u ooman".
guddoomiye ku xigeenka ururka ayaa loo doortay Mudane Cali koonforow oo isna ah arday baranaya cilmiga farsamayaqaan sheeybaarka.
Safiyo Yassin Farax ayaa loo doortay xogheynta ururka, iyadoo runtii khudbad soo jiidasho leh ka jeedisay kulanka, kuna celcelisay baahida loo qabo ineey gabdhaha soomaaliyeed ka qeyb galaan dhaqdhaqaaqa ururka ardada soomaaliyeed.
Gabdhihii ayaa guubaabo & hanaqaad ka helay hadalka Safiyo markaas beey misana go'aansadeen ineey isu soo sharaxaan jagada muhiimka ah ee " Maaliyadda" waxaana loo doortay Ubax Nur oo iyadu horeyba isla jagadan ugu heysa naadiga ardada soomaaliyeed ee kulliyada farsamada St.paul.
Ubax ayaa ku celcelisay in qorsheheedu yahay " ineey aasaasto sidii lacag loogu uruurin lahaa naadiga ardada soomaaliyeed, ee eeysan khasnaji noqon doonin".
dhanka xiriirinta waxaa loo doortay Mr Khadar Saciid oo arday ka ah kulliyada jaaliyada ee Normandale, oo ah meel eey soomaali badani waxbarasho u tagaan.
Arrinta sheegida mudani wexeey tahay in guddoomiyihii hore ee isla naadiga Mr Samatalis Hussein Haille uu noo qeybiyey warqado uu dabooka uga qaadayo inuu iska casilay jagada guddomiyanimada ururka sababo dhowr ah oo uu sheegay darteed, oo eey ka mid yihiin
." waxaa jira dad aan saaxiibo nahay oo ku jira ururka oo sababo aan ka jaahil ahay u diidan fikradaha horumarka, wexeeyna sideey doonaan ka yeeleen dhamaan shirarkii ardadu qaban qaabisay oo eey caburiyeen fikradaha eeysan dooneyn."
. " ururku wuxuu ku fashilmay inuu soo jiito arday soomaaliyeed oo kala nooc ah, maxaa yeelay si dhib ah ayeeyba wax nacfi leh ku soo saaraan.
sababaha uu Mr Samatalis tixay weey badnaayeen, ha yeeshee wexeey isugu soo biya shubanayeen inuu saluugsan yahay naadiga & intii ka seed caleeysaba. wuxuuna raaciyey " ma doonayo inaan jago qabto 10-ka sano ee soo socda.
Maamulka ardada ayaa mar aan weydiiyey halka eey marsiiyeen lacag eey ka gureen dadweynahay kal hore oo eey sheegeen ineey ardada soomaalida ee soomaliya wax ugu qabanayaan ayaa ii sheegay ineey lacagtaas wali hayaan, isla markaana u qoondeeyeen ineey affar jaamacadood oo somalia ku yaal oo kala ah : Jaamacada Xamar, Jaamacadda boosaaso, Jaamacadda camuud & jaamacadda hargeysa. eey u qeybin doonaan qalab waxbarasho ama deeq waxbarasho hadba tii leysku waafaqo, wexeeyna ii sheegeen ineey darsayaan arrintaas hadda, isla markaana eey dadweynaha la socodsiin doonaa wixii eey taa ka yeelaan.
isku soo duuboo xafladu wexeey ku dhamaatay jawi wanaagsan, reynreyn & farxad, wexeeyna arday badani ii sheegeen ineey la dhacsan yihiin qaabka uu u socdo naadiga ardada.
Carlson school of managment.
Warbixinta: Qaybtii 1aad - Ka Akhri Halkan
SomaliTalk | 30.9.2002 |